Soo dejisan WinX MediaTrans 6.8 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WinX MediaTrans
WinX MediaTrans – software ah si ay u gudbiyaan xogta u dhexeeya aad PC iyo qalabka macruufka. software waa ay awoodaan in ay gudbiyaan images, waraaqaha, music ama video ah oo tayo sare leh iyo qaabab kala duwan. WinX MediaTrans kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan, edit, ama tirtirto playlists ah. software wuxuu taageeraa riixo ee files video aan luma tayada iyo diinta ee qaabab video qaab ku habboon in loo maqli karo video on Iphone iyo Ipad. WinX MediaTrans u saamaxaaya in ay bedesho info artist ah iyo macluumaadka kale ee file in hab Dufcaddii. WinX MediaTrans sidoo kale taageertaa gurmad isticmaalaya ah drive flash dibadda.
kala iibsiga xogta Quick
Transfer of 4 kiiloo mitir iyo HD video in hab Dufcaddii
Management of files music iyo playlists
Riixo of files aan luma tayada
Soo dejisan WinX MediaTrans
Faallo ku saabsan WinX MediaTrans
WinX MediaTrans Xirfadaha la xiriira